बि.सं.२०७३ साल पौष २० गते बुधवारको राशिफल
नेपाली मितिः वि.सं. २०७३ । नेपाल सं. ११३७ । योग सं. ३७ । पौष महिनाको २० गते बुधवार ।
अँग्रजी मितिः ई.सं. २०१७ जनवरी महिनाको ०४ तारिख ।
योगः वरियान योग ।
तथीः हेमन्त ऋतु पौष शुक्लपक्षको षष्ठी तिथी, १२ः२४ बजेपछि सप्तमी तिथी ।
नक्षत्रः पूर्वभाद्रपदा, १५ः१२ बजेपछि उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र ।
करणः तैतिल १२ः२४ बजेसम्म उपरान्त गर करण ।
चन्द्रमाः कुम्भ राशिमा, ०९ः२३ बजेपछि मीन राशिमा ।
काठमाडौंमा सूर्यास्तः १७:२१ बजे ।
राहुकालः १२ ः०८ बजेपछि १३ः२७ बजेसम्म ।
मेष राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन बिहानी समय पेशा एवं व्यवसायिक कार्यको लागि सहज नै देखिएको छ । दैनिकी कामकार्यबाट पनि राम्रौ उपलब्धि हुनेछ । क्रमशः गोचरको स्थितिमा परिवर्तन आउनेछ । खोजेकै आर्थिक उपार्जनको लागि अल्लिक प्रयत्न गर्नु पर्ने छ । तथापि खासै चेष्टा नपुर्याइएको काम बनेर आयआम्दानी हुने तथा फुर्तिफार्ति हुने र व्यस्त रहनपर्ने हुनसक्ने छ । आकस्मिक आयको बाबजुत खर्चको पनि उतिकै सम्भावना रहेको कुरालाई नकार्न सकिन्न । कसैकसैलाई विनामेहनतको आर्जनतर्फ मन आकर्षित नहोला भन्नसकिन्न ।
वृष राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन आयप्रद देखिएको छ । स्वकार्यमा रत्रहनाले व्यवसायबाट राम्रो उपलब्धि लिनसकिने छ । औकात एवम् स्तर अनुसार समाजसेवा, राजनीति एवम् जागिर आदिमा प्रगति हुनेछ । सामाजिक प्रतिष्ठा तथा आत्मबल एवम् यशकृति बृद्धि हुनाले सुख र सन्तुष्टिको अनुभूति हुनेछ । प्रशंसक बढ्ने र आफन्तिको शुभसमाचार प्राप्त हुनेछ । सम्मानित यात्राको अवसर पनि मिल्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ । यो गोचर जनित शुभफल पाउन जन्मग्रहमा प्रतिकूल दशा भोग्नेहरुले भने केही उपायको अवलम्बन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
कर्कट राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन यद्यपि ग्रहको केही अबरोध देखिएको पनि छ रपनि दिनलाई सुधार भएर आएको मान्न सकिन्छ । भाग्यको बृद्धि हुने तथा मनमा सात्त्विक विचारले प्रसय पाउने छ । केही धार्मिक कार्य सम्पादन गर्नसकिने छ । धार्मिक एवम् आध्यात्मिक उत्प्रेरणाको बलले दैनिक व्यवहारमा समेत मद्दत पुर्याउने छ । केहीहद्सम्म व्यवसायिक कार्यमा सफलता मिल्नाले आँट बढ्नेछ । नोकरी आदि क्षेत्रमा आएका अबरोधहरु हटाउन पहल हुनेछ भने राजनीति तथा संघसंस्था आदिको क्षेत्रमा संलग्नता र हैसियत अनुसारको जिम्मेवारी एवम् भूमिकाको आशा देखिनसक्ने छ । थप सपलताको लागि आज यहाँले हनुमारवीरको जप वा श्रद्धाभक्ति गर्नु विशेष शुभप्रद हुनेछ ।
सिंह राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन विपरित रहेको छ, स्वास्थ्यमा समस्या देखिने तथा ईज्जत–प्रतिष्ठामा चुनौती थपिने र खर्च बढ्नसक्ने छ । कार्यमा विघ्नबाधा आइपर्ने, शत्रु सल्बलाउने जस्तो प्रतिकूलता आइपर्न सक्नेछ । आफ्नै बुद्धिले दुःख पाइनसक्ने पनि ग्रहगोचरले देखाइरहेको छ तसर्थ व्यवहारिक तरिकाबाट सजगता अप्नाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । आत्मबल बढाएर संघर्ष गर्नाले अन्तिममा सफलता मिल्नेछ । कार्यक्षेत्रमा अल्लि बढी परिश्रम गर्दा केही उपलब्धि आर्जन गर्न सकिएला । रोगी तथा दीनदुखीको सेवा सहयोगमा समयको सदुपयोग गर्नाले ग्रहको प्रतिकूलदोषलाई न्यूनिकरण गर्न मद्दत हुनेछ ।
कन्या राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन दाम्पत्य एवम् भौतिक सुखकर रहनेछ । दाम्पत्य सुख मिल्ने तथा विपरित लिङ्गीको सहयोग मिल्नेछ । युवायुवतीहरुको लागि प्रेम सम्बन्धको प्रस्ताव आउन पनि सक्ने सम्भावना रहनेछ । आन्तरिक तथा वैदेशिक यात्राको पनि सम्भावना देखिएले भ्रमण आदिको अवसर मिल्नसक्ने छ । व्यापार व्यवसायीले कर्मक्षेत्रबाट राम्रो लाभ गर्न सकिने छ । जागिर आदि र घरपरिवार एवम् कार्यक्षेत्रमा सौहार्दपूर्ण वातावरण सृजना हुनेछ । विभिद् सांसारिक उपलब्धि हुन गई मानसिक सुख एवम् शान्ति मिल्नेछ ।
तुला राशिहुनेहरुको लागि आजको दिन पुरुषार्थ बढ्ने कार्यक्षेत्रमा आएको अड्चन हटाउन प्रयत्न हुनेछ भने विपक्षिका उपर प्रतिकार गर्ने योजना पनि बन्नेछ तर, ग्रहले त्यति धेरै बल दिइसकेको छैन जसको कारणले आँट आएपनि काम फत्ते गर्न अल्लि गार्हो पर्नेछ । ससाना काम एवं व्यवसायमा उन्नती हुनेछ । र आम्दानी बढ्नसक्ने छ । शारीरिक आरोग्यता बढ्ने, अनुहारमा कान्ति बृद्धि हुनेछ । आज यहाँको लागि छ अङ्क, हरियो रङ्गको प्रयोग र बढी आँट गरेको काममा सफलता प्राप्त गर्न गुरु वा विद्वान मान्यजनको सेवा आराधना वा गाईको सेवा गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
वृश्चिक राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन ग्रहगोचरलाई सकारात्मक मान्नसकिन्छ तथापि अल्लि घमण्ड तथा प्रमाद् बढी हुने हो कि भन्ने शङ्का देखिन्छ । शक्ति तथा विद्याको अहं योजना बनाए पनि गोचरले त्यति साथ दिएको देखिँदैन । फुर्ति गरी पासो पर्नसक्ने छ, काम फत्ते नभई व्यक्त नगरेकै राम्रो हुनेछ । मान्छेहरुको झ्यास्सै विश्वास गर्नाले पश्चाताप पर्नसक्ने सम्भावना पनि छ, होसियारी अप्नाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । भाका तथा आश्वासन पूरा हुन गार्हो परेपनि संयमपूर्वक स्वाध्याय तथा स्वकार्यरत रहनाले लगनशीलता तथा धैर्यताको फलस्वरुप केही उपलब्धि मिल्नसक्ने छ । आज यहाँलाई पाँच अङ्क, रातो एवं सेतो रङ्गको प्रयोग र गोचरबाधालाई न्यूनताको लागि गौरीनन्दन श्रीगणेशको साथमा भगवान श्रीहरिको श्रद्धाभक्ति एवं स्तुति गर्नाले केही हद्सम्म राहत मिल्नसक्नेछ ।
धनु राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन राम्रै व्यवहार गर्दा पनि परिणाम अनायाशै उल्टो आउनसक्ने गोचर देखिएको छ । मान्छेहरुसँग बोली व्यवहार गर्दा सावधानी अप्नाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । अन्यथा वादविवाद तथा मनमुटाव जन्य प्रतिकूलताको सामना गर्नपर्ने सम्भावना रहेको देखन्छि होसियारी अप्नाउनु होला । मानसिक सोँचमा पनि संकिर्णता बढ्नसक्ने छ भने स्वास्थ्यमा पनि केही मन्दि आउनसक्ने छ । पारिवारिक समस्या थपिने र गर्नलागेको काममा विलम्ब हुने सम्भावना देखिन्छ । आज चार अंक, सेतो रङ्ग यहाँको लागि उपयुक्त हुनेछ भने यहाँलाई आमा वा आमासमानकी मातृशक्तिको आर्शिवादले विघ्नबाधा हटाउन मद्दत गर्नेछ ।
मकर राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन हिम्मतिलो र सक्रियभूमिका हुँदाहुँदै पनि मुख्य काममा अपेक्षा गरेबमोजिम फल नपाइने हो कि भन्ने शङ्का देखिएको छ । तथापि ठूलो परिणाममा नभएपनि केही उपलब्धि भने हुनेछ । आज गर्नै खोजेको कार्यलाई मान्यजनको अनुमति नमिल्न पनिसक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । बा“की पक्षमा उत्साह–उमङ्गिलो दिन मान्नसकिन्छ । स्वजनबाट सहयोग मिल्ने र प्रतिस्पर्धामा विजय भइने छ । सामान्यतया आकस्मिक लाभ एवं प्रख्याति मिल्नेछ । आज गुरुजनको आर्शिवाद लिनु र उहाँहरुलाई खुशी बनाउनुले मुख्यकाममा आउने अबरोध निवारणको लागि मद्दत गर्नेछ ।
कुम्भ राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन सकारात्मक ग्रहगोचर देखिएको छ । बोलीको प्रभाव राम्रो पर्ने गोचर परेको हुनाले प्रवचन, अध्यापन, उद्घोषण, भाषण आदि वाणीवृति हुनेहरुको लागि विशेष अनुकूल रहनेछ । धुकुटिमा धनधातु तथा खजाना भण्डारन गर्न सकिने छ । परोपकार एवम् समाजसेवाका क्षेत्रमा पनि ग्रहले साथ दिएको छ । कुटुम्ब जनको आगमनले पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण बन्नेछ भने गृहस्थ व्यवहार पनि सार्थक हुनेछ । आज यहाँलाई दुई अंक, सेतो रंग उपयुक्त रहने छ भने लक्ष्मी भगवतीको श्रद्धाभक्ति शुभप्रद हुनेछ ।
मीन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन शारीरिक आकर्षण एवम् मानप्रतिष्ठा बढ्नेछ भने मिठो खानेकुरा प्राप्ति हुनसक्ने छ । व्यवसायबाट धनलाभ एवं भौतिक सुख र आफन्तजनबाट प्रशंसा प्राप्ति हुनेछ । अभिष्टकार्यमा सफलता मिल्नसक्ने गोचर रहेको छ, ईच्छित कार्य पूर्णताको लागि दृढताको साथमा अगाडि बढ्नसक्नु हुनेछ । सामाजिक जिम्मेवारी थपिनसक्ने छ । मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम आदिमा पनि सरिक हुन पाइनसक्ने छ । नयाँ लगानीको प्रस्ताव आउनसक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । विवाह योग्य युवायुवतीको लागि वैवाहिक सम्बन्ध जोड्ने प्रसङ्ग चल्नसक्ने छ । समयको सदुपयोग गर्नुहोला ।
बि.सं.२०७५ साल जेठ ११ गते शुक्रवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल जेठ १० गते बिहीवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल जेठ ९ गते बुधवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल जेठ ८ गते मङ्गलवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल जेठ ७ गते सोमवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल जेठ ६ गते आइतवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल जेठ ५ गते शनिवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल जेठ ४ गते शुक्रवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल जेठ ३ गते बिहीवारको राशिफल
२०७५ साल जेठ महिनाको राशिफल यस्तो छ .. हेर्नुहोस् !
बि.सं.२०७५ साल जेठ २ गते बुधवारको राशिफल
बि.सं. २०७५ साल जेठ १ गते मंगलवारको राशिफल